Amathuluzi we-3 ukwazi i-hardware yohlelo lwakho | Kusuka kuLinux
Ya sibonile ezikhathini eziningana ukuthi ungayithola kanjani ulwazi mayelana hardware iyasetshenziswa, ikakhulukazi kusuka esigungwini. Namuhla sethula 3 amathuluzi wokuqhafaza okuyindlela evumelana ngokulinganayo yezifiki noma labo abakhetha ukunethezeka kwe-UI.
Yisixhumi esibonakalayo sokuqhafaza se-lshw, ithuluzi lomugqa womyalo esesivele simboze imininingwane kuwo esinye isihloko isetshenziselwe ukubonisa imininingwane emayelana nezinsimbi ezisetshenziswayo.
En Debian / Ubuntu kanye nokuphuma kokunye:
sudo apt-get ukufaka lshw-gtk
En Fedora kanye nokuphuma kokunye:
I-sudo yum ukufaka i-lshw-gui
Imifula -S lshw-gtk
Kuwo wonke ama-distros, vele usebenzise i-lshw-gtk ukuqala uhlelo. Ku-Fedora, umyalo wokusebenzisa yi-lshw-gui.
I-HardInfo ikhombisa imininingwane ye-hardware esetshenzisiwe kepha, ngokungafani ne-lshw, ibuye ikhombise amanye amaqiniso athakazelisayo ngohlelo lokusebenza: ukulungiswa kwesikrini nolunye ulwazi oluhlobene, inguqulo ye-kernel, igama lekhompyutha nomsebenzisi wamanje, imvelo yedeskithophu, isikhathi sokusebenza, amamojula we-kernel asebenzayo, izilimi ezitholakalayo, imininingwane yohlelo lwefayela, njll.
Uma kukhulunywa ngemininingwane yehadiwe, ayinemininingwane eminingi kune-lshw kepha inembile ngokubonga kusixhumi esibonakalayo sayo esihle.
Ngokufanayo, i-hardinfo ivumela ukwenza izivivinyo zokusebenza okuhlukahlukene (amabhentshi):
I-CPU: IBlowfish, i-CryptoHash, i-Fibonacci, i-N-Queens
I-FPU: FFT neRaytracing
Njengaku-lshw, lonke ulwazi lungathunyelwa kufayela lombhalo kuphela (i-TXT) noma ekhasini le-HTML. Kodwa-ke, kufanele kugcizelelwe ukuthi umphumela wokugcina ungcono kakhulu kune-lshw ngoba imininingwane icacile, iqoqwe kangcono, njll.
sudo apt-get ukufaka i-hardinfo
I-sudo yum ifaka i-hardinfo
ISysinfo iyithuluzi elithuthuke kancane kuneSystem Monitor eza ngokuzenzakalela cishe kukho konke ukusatshalaliswa, ngakho-ke ungalindeli okuningi kakhulu. Kodwa-ke, kuyindlela elula futhi encane uma kukhulunywa ngokuthola imininingwane ethe xaxa kusuka ohlelweni.
sudo apt-get ukufaka sysinfo
Yourt -S sysinfo
Ukubona uhlu oluphelele lwemiyalo nezinye izindlela zokwazi i-hardware yohlelo lwakho, ungafunda le ndatshana endala.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Amathuluzi we-3 ukwazi i-hardware yohlelo lwakho
Imininingwane enhle kepha inothi nje futhi ngiyathemba ukuthi awuyithathi ngendlela engafanele, esikhundleni se-ubuntu kanye ne-derivatives kufanele kube yi-Debian kanye ne-derivatives, futhi ngathi ngiyabonga ngolwazi
Ngimangele kakhulu ukungaboni iKInfoCenter lapha
Iwusizo kakhulu futhi iyathakazelisa.
Futhi ngiyakwazi yini imininingwane ngememori ye-RAM ye-pc yami?
UGabriel Llorens kusho
Sawubona, ngingayisebenzisa kanjani i-hardinfo kusuka kulayini womyalo ukwenza amabhentshimakhi? Ngibona kakhulu!!
Phendula uGabriel Llorens
Izinhlobonhlobo: ithuluzi lokushintsha amaphephadonga ngokuzenzakalela